Paarkiiwwan biyyattii badiirraa baraaruun gahee hundaa ta’uu qaba
Itoophiyaa teessuma lafaafi haala qilleensa barama garaagaraa qabaachuushee bineensotaafi shimbirroota gosa garaagaraa akka qabaatu ishee taasiseera. Haaluma kanaan yeroo ammaa hoosiftoota gosa 32, shimbirroota gosa 16, reeppitaayiloota gosa 15, amfiibiyaanota gosa 30fi qurxummiilee gosa 40 ta’an biyya keenya qofatti argamu. Paarkiiwwan bineensota bosonaa kunneeniif da’oo ta’an 28 oltu jira. Paarkiiwwan kunneen bal’ina lafa biyyattii keessaa %8 ol qabatanii argamu. Haa ta’u malee paarkiiwwaniifi bineensonni bosonaa kunneen yeroo ammaa rakkoo keessa seenuutu himama.
Dhimma kana ilaalchisee torban darbe Abbaan Taayitaa Eegumsaafi Misooma Bineensota Bosonaa Itoophiyaa, ibsa miidiyaaleef kennee ture. Daarekteerri olaanaan Abbaa Taayitichaa Obbo Kumarraa Waaqjiraa akka jedhanitti, biyya keenyatti eegumsaafi kunuunsi bineensota bosonaa bifa ammayyaan kan eegalame bara 1950moota keessa ta’us qixa sirriin hojiitti hiikamuu dhabuusaatiin bineensonni hedduun balaaf saaxilamaa turaniiru. Rakkoolee kana furuuf sochii cimaa taasifameen jijjiirama guddaa galmeessuun danda’ameera. Keessumatti, lakkoofsi Waaliyaafi Qorkee dabaluu danda’eera.
Haa ta’u malee, yeroo ammaa paarkiiwwaniifi bineensonni tokko tokko yaaddoo guddaaf saaxilamaniiru. Kunis mukeen paarkiiwwan keessaa daran ciramaa jiru. Kun ammoo bineensonni da’oo dhabanii akka bakka birootti baqataniif sababa ta’aa jira. Gama biraan ammoo qubsumni seeraan alaa paarkii keessatti babal’acha jiraachuudha. Daandiin saffisaa Adaamaa Awaash paarkii Awaashirratti dhiibbaa uumaa waan jiruuf gamanumaan xiyyeeffatamuu qaba. Haaluma kanaan bineensi warabboo jedhamu bara 1970moota keessa Paarkii Maagoo-Maazee biyyaalessaa keessa ture hanga ammaatti argamee hin beeku. Haaluma walfakkaatuun bineensonni hedduunsi gara baduutti dhiyaataniiru jedhu Obbo Kumarraan.
Ragaan abbaa taayitichaarraa argame akka ibsutti, Paarkiin Biyyaalessaa Gaarreen Kaabaa hubaatii guddaan irra ga’uusaatiin galmee ‘UNISCO’ irraa haqamuuf yaadame tumsa taasifameen yeroo ammaa bayyaannachiisuun danda’ameera. Paarkiiwwan kanneen akka Awaash, Abiyaataa Shaalaa, 'Nacci Saariifi' Baabbillee rakkoo hamaa keessaa waan jiraniif badiirraa baraaruuf tumsi hundaa barbaachisaadha. Paarkiiwwan kunneen warra kaaniin yommuu walbira qabaman rakkoonsaanii hamaa ta’e malee paarkiiwwan hunduu rakkoorraa bilisa miti. Bu’uuraalee misoomaa bineensotarratti haala dhiibbaa hin geessisneen paarkiiwwan keessatti diriirsuun kan danda’amu ta’us sababa baajeta guddaa gaafatuuf bifa jedhameen diriirsuun hin danda’amne.
Gama biraan adamoo seeraan alaafi mancaatii bosonaan wal qabatee lakkoofsi bineensota bosonaa hedduun hir’ataa jira. Haaluma kanaan yeroo ammaa biyya keenya keessatti lakkoofsi arbaa 2000, sattawwaan 200fi lakkoofsi leencaa 1000 hin caalu. Gama biraan ammoo lakkoosi yeeyyiifi qeerransa biyyattii mata mataan dhibba tokko kan hin caalledha. Lakkoofsi bineensota kunneenii yommuu ilaalamu sadarkaa nama boonsu osoo hin taane sadarkaa yaaddessaarra jira. Paarkiiwwan naannawaa daangaa biyyoota ollaatti argaman yeroo baay’ee namootni seeraan ala daangaa ce’uun bosonaafi bineensota bosonaarratti dhiibbaa uumaniin rakkoo keessa akka jiranis dagatamuu hin qabu.
Haaluma walfakkaatuun namootni biyya ollaarraa gara biyyattitti baqatan kan qubatanii jiran naannawaa paarkii waan ta’eef dhiibbaa isaan bosonaafi bineensota bosonarratti dhaqqabsiisan salphaatti kan ilaalamu miti. Kanaaf saaxilamoodha kan jedhamans paarkii Maagoo Maazeefadha. Gama biraans dhiibbaan hawaasa naannoos olaanaa ta’uun hubatameera.Ta’us hirmaannaafi fayyadamummaa hawaasaa naannoo mirkaneessuun paarkiiwwan badiirraa baraaruuf xiyyeeffannaan hojii eegaluu dubbatu Obbo Kumarraan.
Walumaa galatti, paarkiiwwan biyyattii bara 1997 dura badii hamaa keessa turan bayyaannachiisuun danda’amus yeroo dhiyoo as dhiibbaa garaagara mudataa jiruun paarkiiwwan tokko tkko balaa hamaaf kan saaxilaman ta'uun hubatameera. Kanaafuu, paarkiiwwan kunneen badiirraa baraaruuf tumsi hundaa daran barbaachisaadha.
Torban kana/This_Week 43536
Guyyaa mara/All_Days 1468316